Duofilm (ဒိုဖင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Duofilm (ဒိုဖင်)
Duofilm (ဒိုဖင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Duofilm (ဒိုဖင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Duofilm (ဒိုဖင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ကို အသားမာများနဲ့ ငါးမျက်စိစတာတွေကို ဖယ်ရှားရာမှာ အဓိက အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီဆေးကို အခြားသော အခြေအနေတွေမှာလည်း သုံးစွဲနိုင်သေးတဲ့အတွက် ထပ်မံသိရှိလိုပါက သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Duofilm (ဒိုဖင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဦးစွာ အသားမာ ဒါမှမဟုတ် ငါးမျက်စိကို နူးညံ့သွားအောင်၊ပျော့သွားအောင် ရေနွေးထဲမှာ ငါးမိနစ်လောက် စိမ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ လုံးဝခြောက်အောင် သေချာပြန်သုတ်ရပါမယ်။
ရေနွေးထဲစိမ်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ ဆေးမလိမ်းခင်စပ်ကြားမှာ ဂျီးတွန်းကျောက်၊အသားမာလှီးတဲ့ အပြားလေး ဒါမှမဟုတ် ကျောက်လွှာအုပ်ထားတဲ့ သစ်သားချောင်းလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး အရေပြားအပေါ်ယံမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို ဆဲလ်အသေတွေကို အပေါ်ယံက ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဆေးအာနိသင်ပိုမိုပြသနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးမျက်စိ သို့မဟုတ် အသားမာကို အလွန်အမင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်တိုက်ခြင်း မပြုရပါဘူး။
အသားမာ ဒါမှမဟုတ် ငါးမျက်စိတခုလုံးကို အုပ်မိအောင် ဆေးအလွှာပါးပါးလေးတထပ်ကို လိမ်းပါ (ဆေးလိမ်းဖို့ ကိရိယာလေးပါလာရင် အသုံးပြုပါ)။ ဖြစ်တဲ့နေရာကိုပဲ ဆေးလိမ်းရမှာဖြစ်ပြီး ဘေးက ပုံမှန်အရေပြားကို ဆေးနဲ့မထိမိစေဖို့ ဂရုပြုရပါမယ်။ ပြီးရင် ငါးမိနစ်လောက် အခြောက်ခံပါ။
ဆေးကို မျက်လုံးထဲမဝင်ပါစေနဲ့။ ဆိုးဆိုးရွားရွား နီရဲပူလောင်နာကျင်လာတာမျိုး ခံစားရမယ်ဆိုရင် ဆေးကို ဆက်မလိမ်းပါနဲ့တော့။ ဒီဆေးဟာ မီးလောင်လွယ်ပါတယ်။
ဆေးအသုံးပြုပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထပ်မံသိလိုတာတွေရှိရင် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Duofilm (ဒိုဖင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Doufilm®
ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Doufilm®
ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Duofilm (ဒိုဖင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ။
Doufilm® ကိုမသုံးစွဲခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Doufilm® ကိုမသုံးစွဲခင်မှာ အောက်ပါအချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောရပါမယ်။
Doufilm® ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
• အခြားသော နာမကျန်းမှုများ၊ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် (ဥပမာ အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊အရေပြားကူးစက်ရောဂါများ၊အရေပြားပူစပ်နီရဲနာကျင်ယားယံခြင်းများ၊ဆီးချိုရောဂါ သို့မဟုတ် သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းမွန်ခြင်း စသည်) ရင်ဆိုင်နေရခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Duofilm (ဒိုဖင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ခွဲစိတ်မှုမခံယူမီ အချိန် :
ခွဲစိတ်မှုမခံယူခင် အချိန်မှာ သင်လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး (မိမိဖာသာ သုံးစွဲတဲ့ဆေး၊ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သုံးစွဲတဲ့ဆေး၊သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ စသည်)အကြောင်းကို ဆရာဝန်အား ကြိုပြောပါ။
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ တိရ စ္ဆာန်တွေမှာ ပြုလုပ်တဲ့ စမ်းသပ်ချက်တွေအရ salicylic acid ကို ပမာဏမြင့်မားစွာ သောက်သုံးရင် သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ Duofilm ကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Salicylates ဟာ မိခင်နို့ထဲမှာ စွန့်ပစ်တဲ့အတွက် ကလေးနို့တိုက်ချိန်မှာ Duofilm ကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကလေးနို့တိုက်ချိန်မှာ Duofilm ကို အသုံးပြုခဲ့ရင် ဆေးကို ရင်သားတဝိုက်မှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ ဒါမှသာ မတော်တဆ ကလေးပါးစပ်ထဲရောက်သွားမှာကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်ချိန်မှာ Duofilm ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Duofilm (ဒိုဖင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
Doufilm® ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့် လက္ခဏာများ (အနီစက်များထွက်ခြင်း၊အင်ပြင်ထွက်ခြင်း၊ယားယံခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊ရင်ကြပ်ခြင်း၊ပါးစပ်၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ စသည်တို့ ရောင်ရမ်းဖောင်းကားခြင်း။
အနည်းငယ် ပူလောင်ခြင်း၊အရေပြား နီရဲကွာကျခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Duofilm (ဒိုဖင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Duofilm (ဒိုဖင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Duofilm (ဒိုဖင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသုံးပြုလိုတဲ့နေရာ သို့မဟုတ် ငါးမျက်စိပေါ်ကို တနေ့တခါသာ လိမ်းရမှာဖြစ်ပြီး ညအိပ်ယာဝင်ချိန်မှာ အသုံးပြုရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Duofilm (ဒိုဖင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၁၂နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လူကြီးတဦးဦးက ကြီးကြပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အသက်၂နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ အသုံးမပြုရပါဘူး။
Duofilm (ဒိုဖင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Doufilm® လိမ်းဆေး ၁၅ စီစီ : Salicylic Acid 16.7%, Lactic Acid 15%
ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Doufilm. https://www.drugs.com/drug-interactions/salicylic- acid-topical.html. Accessed